နားမလည်​​ပေါင်​​တော်​ ကျွန်​မက ​တောသူသာရယ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » နားမလည်​​ပေါင်​​တော်​ ကျွန်​မက ​တောသူသာရယ်​
နားမလည်​​ပေါင်​​တော်​ ကျွန်​မက ​တောသူသာရယ်​
Posted by moonpoem on Sep 13, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Society & Lifestyle | 16 comments
တောသူဆိုတော့ အတိတ်နမိတ်တို့ တဘောင်တို့ တော့ အယုံသားကလား။အဲဒါကြောင့်နေမယ် တလောက ရွာက ကြီးတော်ဘုမက ပြောတယ် တို့ များမြန်မာပြည်မယ် ပီအာ စနစ်ကျင့်သုံးမယ် ဘာမယ်ဖြစ်တော့ သူက လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ စနစ်နာမည်ကိုက ပီအာ ဆိုမှတော့ အသံထွက်အတိုင်း အပီအာ မှာအေ့။ အဲဒါကြောင့် ညည်းလည်း ကန့်ကွက်လို့ ပြောတာ သူပြောလို့ကျွန်မလည်း သံယောင်လိုက်ပြီး အင်းဆိုပြီး ကန့်ကွက်လိုက်တာပဲ။အတိအကျတော့ နားမလည်ပေါင်တော့ကျွန်မက တောသူ မဟုတ်လား။
ရွာထိပ်က ကာလသားခေါင်းဆောင် မောင်သိန်းကလည်း မခေဘူးတော့။ သူက ဗေဒင်တွေ ဘာတွေ တွက်တတ်လို့ နဲ့ တူပါရဲ့ ။ ပြောသေးတာ ဘာတဲ့ ဟိုနင်းအလှမယ် ကောင်မလေး ရင်သားခွဲစိတ်ပြုပြင်တာ အဟုတ်လိုလို ကောလဟာလလိုလိုတွေ ဖြစ်နေတာထောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ရှေ့ ဆက်ပြီး တိုင်းရင်းသား ရင်ကြားစေ့ရေးတွေ၊ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရလိမ့်ဦးမယ်
ဆိုပဲတဲ့။အတိအကျတော့ နားမလည်ပေါင်တော့ ကျွန်မက တောသူ မဟုတ်လား။
အံမယ် သူက ပြောသေးတယ်။ဟိုးတလောက ရန်ကုန်မြစ်နား နဂါးကြီးပေါ်လာသလိုလို၊ ခေါင်းလောင်းကြီးရသလိုလိုနဲ့ သတင်းကြားရသေးတာ အဲဒီဆယ်တဲ့လူက အဆိုတော် စံလင်းတဲ့တော့။ ကျွန်မကဖြင့် အံ့တွေကို သြလို့ ။ကျွန်မလည်း သူ့သီချင်းတွေ ဘာတွေသိပ်ကြိုက်တာ ကဗျာမမီ စာမမီ သီချင်းတို့ ဘာတို့ ဆို အသည်းစွဲပေါ့။ အခုတော့ သီချင်း ပြောင်းဆိုသွားပြီပေါ့လေ။ ကဗျာမမီ စာမမီ အစား ခေါင်းလောင်းကလေးတွေ မြည်နေပြီ ဆိုလားပဲ။အတိအကျတော့ နားမလည်ပေါင်တော့ ကျွန်မက တောသူ မဟုတ်လား။
ဟိုတစ်နေ့ကလည်း ဘယ်ကဆိုလည်း ၁၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ဆင်းကဒ်တွေကို ချရောင်းလိုက်တာ
လူတွေကို တန်းစီလို့ တဲ့ မြို့ ကပြန်လာတဲ့ ကိုခွေးနီ ပြောတာ။ သူ ဘယ်ကနေ သတင်းကြားလည်းတော့ မသိပေါင်တော့ နောက်နှစ်လနေရင် ၅၂၈ကျပ်တန် ဆင်းကဒ်တွေ ထပ်ချဦးမတဲ့။သူက မြို့ မှာ
အနေများတော့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိတော့ ပြောသွားသေးတာ။ဖုန်းကသာ ဈေးချရောင်းနေတာ ဖုန်းပြောတဲ့ တိုင်ကနည်းလို့တော့ အဲဒီ့ ၅၂၈ကျပ်နဲ့ ရောင်းရင်တဲ့ လိုင်းတွေ ကြပ်မတဲ့တော့ ။
သူ့ လေသံအရဆိုတစ်ခုခုကို Update လုပ်ချင်ရင် တိုင်နဲ့ ခေါင်း တက်ဆောင့်တဲ့တော် ၊ Download ဆွဲချင်ရင် မြေကျင်းတူးကြတဲ့တော် ဖုန်းပြောချင်ရင်တော့ အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာပို့တဲ့။
ဘာလို့ မေတ္တာပို့ ရမှာတုန်းတော့လို့ ကျွန်မက မေးတော့ ဖုန်းလိုင်း မမိရင် ကုန်းအော်ရမှာမလို့ 
၀ိုင်းမဆူကြ မဆဲကြရလေအောင် မေတ္တာပို့ရတာတဲ့တော့။ကျွန်မဖြင့် ဆင်းကဒ်ဖြန့်တဲ့ ဟိုနင်းကို
ကျေးဇူးတွေကိုတင်လို့ ။ဒါဟာ လူသားတွေကြား မေတ္တာပွားများစေတဲ့ ပါရမီဖြည့်ပေးတာ မဟုတ်လားတော့။ တခြားအင်္ဂလိပ်စကားတွေတော့ အတိအကျ နားမလည်ပေါင်တော် ကျွန်မက တောသူ မဟုတ်လား။
ပြောရတာလည်း မောသွားပြီ။ အခုကျွန်မတို့ ရွာအမည်ပြောင်း ဆွမ်းကျွေးရှိလို့ ရွာဦးဘုန်းကြီး
ကျောင်း သွားလိုက်ဦးမယ်တော်။ရှင်တို့ စိတ် ကျွန်မသိသား ရွာအမည် ဘာလို့ ပြောင်းရလဲဆိုတာ သိချင်နေတာ မဟုတ်လား။ဟိုနင်းတော့ သမီးကလေး ကျေးရွာ အသိမ်းခံရတာ နာမည်က ချစ်စရာကောင်းလို့ အသိမ်းခံရတာတဲ့ မအူပင်ကတော့ မအူမလည်မို့အသိမ်းခံရတာတဲ့ ။ အဲဒါ ရွာက ဘဘုန်းကြီးက နာမည် အတိတ်နမိတ်နဲ့ ကျွန်မတို့ ရွာလယ်မြေတွေ အသိမ်းမခံရအောင်တဲ့ နာမည် ပြောင်းပစ်လိုက်တာတော့။ ရွာနာမည်က ဘာတဲ့ သိမ်းရဲရင် သိမ်းကြည့်ရွာ တဲ့။ နာမည်သာ ပြောင်းရတာပါလေ သိမ်းရဲရင်သိမ်းကြည့်ရွာသာ ဆိုရတယ် ဟိုက လာသိမ်းရင်လည်း
ခံရဲလို့ ခံလိုက်ရတယ်ဆို ပြီး နာမည်ပြန်ပြောင်းရမှာပဲတော်။ ကျွန်မ စိတ်အတိုင်း ပြောကြည့်တာပါ။ အတိအကျတော့ နားမလည်ပေါင်တော့ကျွန်မက တောသူ မဟုတ်လား။ ကဲ အချိန်လည်း လင့်ရောမယ်။ ဆွမ်းကျွေးအမီ သွားလိုက်ဦးမယ်တော်။
ကျုပ်တို့ဂဇက်ရွာမှာလဲ သေရွာပြန်တို့ အရှင်ထွက်တို့ ရှိတယ်ခင်မျ
၅၂၈ ဆင်း လာ မယ့် ကဒ် တွေချပေးရင်တော့ မြို့တက်ပြီး တစ်ကဒ်လောက်တော့ ဝယ်အုံးမှဘဲလေ
သြော် ဒါနဲ့ ကလေးမလေး အဲဒီ ၅၂၈ ဆင်းကဒ်တွေက ဘယ်ကဆင်းလာမှာလဲ မြို့ဦးစေတီလှေကားကလား ဟို အထပ်အမြင့်ကြီးဆောက်ထားတဲ့ ပလာတာဈေး က အက်စကီမိုးလှေကား ကလား ပြောပေးအုံးဟ
လောလောဆယ် 528 အလှည့် မရောက်သေးဘူး ဗျ
ကြား ထဲမှာ 972 ရှိသေးတယ်
FB ထဲမတော့ ပေါက်စီ နဲ့ အသားတု ပြသနာ ဆိုပြီး ပုံတွေ နဲ့။
ခေါင်းလောင်းကတော့ မရှိတာ ဆယ်ဖို့ နောက်တစ်ဖွဲ့ လာဦးမယ်ဆိုလား။
ဒီတစ်ခါတော့ နဂါး ကနေ ဘာက ကူ ဦးမယ်မသိ။
လကဗျာ ရဲ့ စာတွေ ကို မျှော်သူ ပိတ်သတ်ကြီး အတွက် မကြာမကြာ လာပါအေ။ :-))
ကျုပ်ကလည်း တောသားမို့ ဘာဘာညာညာ မသိပေါင် …. တလောက ကြားတာ ဒင်း ကံကောင်းလို့ မာမလကီးယားတယ်ဆိုလား …?????
နဂါး အမြီးနဲ့ ပွတ်တာပဲ ချိသေးတယ် မှတ်ပလါးးးး
ပီအာမှာ.. ပါမေးနန့်ရက်စိဒန့်တွေအတွက်ပါသမို့.. အပီမအာပါနဲ့ဗျာ..
ပိုသေချာအောင်.. ကဒ်အရောင်လေးပါ..အစိမ်းလေးလုပ်.. ဂရင်းကဒ်လို့နာမယ်ပေးပါ…လို့..။
ဟိုနင်း ၅၂၈ကျပ်​တန်​ ဆင်းကဒ်​က ​မြေနီကုန်းခုံး​ကျော်​တံတား​ပေါ်က​နေ ချ​​ပေးမယ်​တဲ့။အတိအကျ​တော့ မသိ​ပေါင်​​တော်​ ကျွန်​မက​တောသူမဟုတ်​လား။
တည်တည်တံ့တံ့ တွေးတောတတ်တဲ့ တော်တော်တတ်တဲ့တို့တစ်တွေ တောတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုး၊ တောင်တွေ တတိတတိတက်တုန်း၊ တိမ်တောင် တောက်တောက်တွေ၊ တောက်တာတောတွေ၊ တော်တော် တောင့်တင်းတဲ့ တုံးတံတားတွေ၊ တိုင်တိုတိုတွေ၊ တောတဲတွေ၊ တစ်တောင်တိတိ တိုင်းတာတူးတဲ့ တွင်းတိမ်တိမ်တွေ၊ တီတွန့်တွန့်တက်တက်တွေ၊ တမ်းတမ်းတတ တီတီတာတာ တတွတ်တွတ် တွန်တတ်တဲ့ တစ်တီတူးတွေ၊ တွယ်တက်တတ်တဲ့ တက်တူတွေ၊ တောက်တဲ့တုတ်တုတ်တွေ၊ တောတွေ့ တောင်တွေ့ တော်တော်တွေ့တယ်။ တောက်တီးတောက်တဲ့တော်…
ဒါမျိုးတွေလဲ တတ်သလား.. တဂျီး…
.အင်း..ဒီပို့စ်ဖတ်လိုက်ရမှ အရသာရှိသွားတယ်..ကျေးဇူးပါ လကဗျာ
ဘာမှ နားမလယ်​လို့သာ နဲနဲများနားလည်​ရင်​ ဗမာပြီက်ို အာနာများ တက်​သိမ်းအုံးမလားမသိဘူး ဟင်းဟင်း